ठण्डा दिमागले सोचौं, आरपीको योगदानले सामुदायिक शिक्षाको स्तर कति सुध्रेको छ ? | EduKhabar
ठण्डा दिमागले सोचौं, आरपीको योगदानले सामुदायिक शिक्षाको स्तर कति सुध्रेको छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि ८ मा उल्लेख भएका स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा कामहरूलाई सूचीकृत गरेको छ । शिक्षकहरूको तलब भत्ता निकासी तथा छात्रवृति वितरणका कामहरू स्थानीय तहबाटै भइरहेका छन् भने धेरै स्थानीय तहहरू आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा आफै सञ्चालन गर्दै छन् । केही स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षाका नीति, नियम र कानुन तर्जुमा समेत गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार चैत २८ पछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत रहँदैन । कर्मचारी तन्त्रका नेतृत्व वर्गमा भएको अदुरदर्शिताका कारण शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिने काम जटिल बनेको र लम्बिएको अवस्था छ । यसको समाधानका लागि राजनीतिक तहले चासो दिएको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नचाहने र शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसमा चासो नदेखाउँदा संघीयतामा शिक्षाका सवालमा थप चुनौती बढाएको छ ।
यी दुई मन्त्रालयको को ठूलो भन्ने द्धन्द्धले स्थानीय सरकारको शिक्षाका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यी दुईको चेपुवामा विद्यार्थी र तिनको सिकाइ पर्नु विडम्बना हो ।
स्थानीय तहबाट विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक कर्मचारी नभएको र काजमा रहेकोले पठन पाठन नियमित हुन नसकेको भनि गुनासो प्राप्त भएको र सो अनुसार स्रोत व्यक्तिहरूलाई आफ्नै दरबन्दी भएको विद्यालयमा काज फिर्ता गर्ने निर्देशन गर्न अनुरोध गरिएको पत्र संघीय मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएपछि काजमा रहेको शिक्षक र स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ताको कुरा यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ ।
पढ्नुहोस् : आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो
पत्रमा शिक्षकहरूको काज फिर्ताको विषय पनि छ । दलका कोठा चोटा चाहरेकै भरमा राजधानी र सदरमुकाममा दरबन्दी थमौती गराई रहन सफल शिक्षक स्थानीय सरकारलाई अर्को चुनौती हो । भलै अहिले शिक्षकका संघ संगठन यस विषयमा चुप छन् । कँही कतै केही चर्चा भएको सुनिएको छैन । तर स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गर्ने विषयले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै तरङ पैदा गरेको छ । स्रोत व्यक्तिहरूले यो पत्र सार्वजनिक हुनासाथ पेन डाउनको घोषणा गरे ।
पढ्नुहोस् : आरपी आन्दोलनमा, 'पेन डाउन' को घोषणा
राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरे र ठूलै हुंकार सहित आफूहरूलाई नजिस्काउनका लागि चेतावनी दिए ।
पढ्नुहोस् : आरपीको भेला : स्थानीय तहमै दरबन्दीको माग
स्रोत व्यक्तिका पेसागत सुरक्षाका सवालहरू होलान् तर राज्यलाई चेतावनी दिने सम्मको शक्ति र सामथ्र्य हुनु आफैमा चानचुने कुरा भएन ।
हामीले करिब ९ महिना पहिले नै लेखेका हौं राज्य पुर्नसंरचनको चरणमा छ, शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि पनि विकल्प खोजौँ भनेर ।
स्रोत व्यक्तिले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा के कस्तो भूमिका खेलेका छन् ? उनीहरूले के काम गर्छन् ? भनेर धेरै व्याख्या नगरौँ । यो स्रोत ब्यक्ति आफैले भन्ने कुरा हो, उनीहरुके कामबाट देखिने कुरा हो ।
स्रोत व्यक्तिको ब्यवस्थापनको विषय उठ्नासाथ हामीले ज्यादै ध्यान दिनुपर्ने, संयम हुनुपर्ने र ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था किन गरियो ? परियोजनाले आफ्नो कामका लागि गरेको व्यवस्थालाई के उद्देश्यले स्थायी संरचनामा ल्यायौँ ? के त्यो उद्देश्य हासिल भएको छ ? त्यो उद्देश्य के थियो ?
नेपालमा मात्र होइन संसारका अन्य मुलुकहरूमा पनि हाम्रो स्रोत केन्द्रको ढाँचा पाइन्छ । शिक्षकको कक्षा कोठाको समस्या शिक्षकले बुझेको हुन्छ । शिक्षकलाई पेसागत सहयोग गर्न र शिक्षकका समस्या समाधान गर्न तथा शिक्षणमा उत्प्रेरीत गर्न शिक्षक नै प्रभावकारी हुन्छ । केही वर्ष शिक्षक भइ कक्षाको अनुभव भएको सक्षम व्यक्तिलाई स्रोत व्यक्ति बनाएर विद्यालयमा शिक्षकलाई पेसागत सहयोग उपलब्ध गराउन र शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने काममा खटाउँदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मर्म र उद्देश्य हो ।
के यो उद्देश्य अहिले पूरा भएको छ ? कुन हद सम्म भएको छ ? स्रोत व्यक्तिको योगदानले सामुदायिक शिक्षाको स्तर कति सुध्रेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूलाई सोध्यो भने मात्र वास्तविक रुपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, स्रोत व्यक्तिहरू शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइको सहयोगमा होइन, प्रशासनिक काममै व्यस्त छन् र रमाएका छन्, यो यथार्थ थाह पाउन भने शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई भेट्नै पर्दैन, नाङ्गो आँखाले प्रष्ट देखिने तथ्य हो यो ।
उद्देश्य कक्षा कोठामा सुधार ल्याउने, शिक्षकलाई सहयोग गर्ने हो तर काम प्रशासनिक भयो । तालिम चलाउने भयो, जुन तालिम कहिल्यै कक्षा कोठामा पुगेन । खास उद्देश्य पुरा भएको छैन भने किन राख्ने ?
आरपीको अस्ति मात्र सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले पनि कक्षाकोठा र सिकाइका कुरा गरेको छैन । प्रशासनिक कामका लागि विद्यालयको शिक्षक किन चाहियो ? राम्रो पढाउन सक्ने मान्छे त विद्यालयमा जानु प¥यो । प्रशासनिक काम त जसले पनि गर्छ ।
स्रोत व्यक्तिहरूसँग क्षमता छ । ज्ञान सीप छ । पढाउने पद्धति छ । नेतृत्व कसरी गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सीप छ भने यो एउटा अभूतपूर्व अवसर आएको छ । स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गरौँ र सबै भन्दा कमजोर, व्यवस्थापन र नेतृत्व विग्रेको विद्यालयको जिम्मा लिउँ, त्यसलाई नमुना बनाएर देखाइदिउँ – के श्रोत ब्यक्तिहरुमा त्यो भन्ने आँट छ ?
काज फिर्ता रोकि पाउँ भन्दै प्रधानमन्त्री देखि नेताका दैलो चाहर्न ब्यस्त श्रोत ब्यक्तिहरुबाट यो अपेक्षा ब्यर्थ हुन्छ भन्न हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन । किन भने कक्षा कोठामा सुधार नगरी विद्यालय शिक्षामा परिवर्तन सम्भव छैन । तर श्रोत ब्यक्तिहरु कक्षा कोठा भुलेर प्रशासनिक काम गर्छौ, शिक्षकको तलब निकासा गर्न सहयोग गर्छौ, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहयोग गर्छौ भन्न मै ब्यस्त छन् । तर, कक्षा कोठामा प्रतिविम्बित हुन नसकेको शिक्षक तालिम कति चलाउने ? कोही नयाँ आउला अरु यसका लागि ? त्यसैले श्रोत ब्यक्तिहरुले प्रष्ट भाषामा भन्दा हुन्छ – हामीलाई त यही प्रशासनिक काम प्यारो छ । पढाउन जान, स्कुल चलाउन सक्दैनौ ।
मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने किन गर्नु ? शिक्षा विग्रन्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्ने केही छैन । अहिले पनि धेरै सुध्रेको छैन । विग्रन्छ भन्नेमा सबैलाई चिन्ता छ । कसै न कसैले गर्ला ?
हामीलाई काज फिर्ता गर्दा अरुको जागिर जान्छ हामीलाई फिर्ता नगर भनेर अड्डी कसेका श्रोत ब्यक्तिको कामका बारेमा स्थानीय सरकारलाई बुझ्न मन छ भने सानो काम गर्दा हुन्छ । नाम जे दिए पनि हुन्छ चाहे सर्भेक्षण भनौं चाहे लघु अनुसन्धान । स्थानीय तह आफै सरकार हो, आफ्नो क्षेत्र भित्रको विद्यालय शिक्षाको जिम्मा मात्रै हैन सुधारको मौका पनि खेर जान दिन्न भन्ने अठोट छ भने जनप्रतिनिधिले एक दिनमै तथ्य थाह पाउन सक्छन् ।
- अहिले आरपीले गरिरेहको काम के हो ? तीन वटा काम लेख्नु होस् ।
- ती कामले विद्यालयको पठन पाठन, शिक्षण समस्या र विद्यालयका समस्या समाधानमा के सहयोग पुगेको छ ?
- यही काम गर्न आरपी चाहिन्छ वा चाहिँदैन ।
साच्चिकै विद्यालयले सहयोग पाएका रहेछन्, गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुगेको रहेछ भने चाहिन्छ भन्लान् । प्रअले खाँचो महशुस गरेछन् भने चाहिन्छ भन्लान ? चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा राखौँ, चाहिदैन भन्नेलाई विकल्प सोचौँ ।
आफ्ना मात्र र भावनाका कुरा गर्ने हो भने कसैको रोजीरोटी खोस्न पाइदैन । तर हेक्का राखौं कसैको जागिर जान्छ भनेर राज्यले कसैलाई थप जागिर दिने भन्ने त हुँदैन । कामका लागि जागिर हो, व्यक्तिका लागि जागिर होइन ।
यी सवाल स्रोत व्यक्तिको भूमिका नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ की भूमिकालाई पुर्न परिभाषित गर्नु जरुरी छ भन्नेमा पुग्छ स्थानीय सरकार आफैंले खुट्याउन सक्छन् । स्थानीय सरकारले हेक्का राख्नु पर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको बीसाँै वर्ष देखि तदर्थवादमा चल्ने र चलाउने काम जारी राख्ने कि साँच्चै सुधार गर्ने भन्ने हो ।
देशको संरचना परिवर्तन सुधारका लागि हो, कागजमा लेखेका कुराले मात्रै त्यो सम्भव छैन । रटान छाडेर कर्ममा लागौं, खुल्ला भएर छलफलमा जुटौं ।
प्रकाशित मिति २०७४ फाल्गुन २३ ,बुधबार
bharat adhikari9 months ago
Me too RP.Im not gready for this post.Im against foolish descision.Descision should be done in right way.Is it so RPs arenot doing their job.
manoj patel (teacher)9 months ago
jila xixa karyalay kharij hunu ramro kuro hoina. jila yestariye rupma xixa lai samanbaye garne yeuta jila yestariye karyalaye hunu jaruri xa.
Lok9 months ago
म अारपी हुँ । प्रशासनिक बढि र प्राविधिक कम भएकाे कुरा सही हाे । चाहेकाे परिणाम अाउने गरि स्राेतकेन्द्रलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन कन्जुस्याइँ भयाे । व्यक्ति मात्र उभ्याएर हुने रहेनछ । नर्देशिका अनुसार अाकाे हाे । विधिसम्मत जा भने गईन्छ । हिजाे पनि पढाएकाे र नेतृत्व गरेकाे हाे । फर्केर साे काम गर्न सकिन्छ । कसलाई के काम गराउँदा राम्रो परिणाम अाउँछ, जुन तहकाे सरकारले अह्राए पनि गरिन्छ । लिसाे झै टासिने रहर छैन ।
Jeevan9 months ago
सहि कुरो । उदेस्य: पेशागत सहयोग, काम: प्रशासनिक !
Krishna das koirala9months ago
लेख सान्दर्भिक नै लाग्याे म पनि अार पि नै भएकाले याे पद अब सङ्गियतामा अावश्यक नपरे विकल्प के हाे त ? विगा्र्न त सजिलै छ सपार्नु कसरी ?